Huoshenshan ọgwụ: Chinese ọsọ na a ọsọ megide ọnwụ-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Oslọ ọgwụ Huoshenshan: Ọsọ ndị China na-agba ọsọ megide ọnwụ
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji wuo ụlọ ọgwụ?
Tenbọchị iri na abalị iri.
Site na Jenụwarị 24th, 2020 rue February 2, 2020, ụlọ ọgwụ nwere njiri mara sayensị na ngwa ejikere nke ọma bilitere. Akpọrọ ya "ụlọ ọgwụ Huoshenshan", ọ na-atụ anya na ndị mmadụ ga-ewepụ ihe otiti ahụ na chi ọkụ nke chu.
Nke a bụ ọsọ ọsọ ọsọ na-eju onye ọ bụla anya. Nke a bụ ọsọ ọsọ ọsọ na-eju onye ọ bụla anya. N'azụ ọrụ ebube a "akụrụngwa ara", ọ dịghị chi. Ọkpụkpụ ya na-akpụzi site na nyocha nke ndị ọkachamara a na-apụghị ịgụta ọnụ, anụ ahụ ya bụkwa nke ndị ọrụ nkịtị na-erughị ala na-agba mbọ na-arụ ọrụ abalị niile.
Dị ka akụkọ ndị metụtara ya si kwuo, n'oge kasị elu nke iwu ụlọ ọgwụ Huoshenshan, ihe karịrị ndị ọrụ 4,000 na-ewu ihe na-arụ ọrụ na oge 24, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku nnukwu igwe na ugbo ala na-agba ọsọ n'abalị. Mgbe ndị mmadụ dinara ụra, ndị dike a amaghi ama ka na-alụ ọgụ n'ihu ihu ewu, oge ọrụ kachasị ogologo bụ karịa karịa awa 20.
Kissinger dere n'otu oge na "On China": "Ndị ji obi ike ha na - echebe China mgbe niile." Vulcan nke na-echebe mba China n'ezie abụghị ngọzi ndị a na-akọ n'akụkọ, kama nke ahụ. Ọtụtụ puku ndị ọrụ China na-adịghị agbanwe agbanwe, ndị na-adịghị agbanwe agbanwe nọ n'okpuru oriọna na-enwu enwu n'abalị niile.
Na Jenụwarị 24, 2020, n'oge Ememe Afọ Ọhụrụ, njikọta ezinụlọ na ịingụ mmanya, ọtụtụ ndị ọrụ ji aka ha gbaga "n'ọgbọ agha" ahụ n'akụkụ niile nke mba ahụ. Ha ji ngwa ngwa dobe ihe ndi ahu, hapuru ndi ha hur u n’anya,
jirikwa anya mmiri dee akwụkwọ ozi ekele.
N’ime ha, e nwere ndị chọrọ ya mma, ndị mason, ndị agha, na ndị ọkwọ ụgbọ ala. Ha niile bụ ndị nkịtị. Ma ọ bụ ike ndị a na-achịkọta olileanya maka ọrụ ebube.
Wu Xiaohong, onye na-arụ ọrụ na Wuhan, kpọrọ ndị ọrụ ozugbo ha natara ọkwa ahụ, wee gbaga ebe ahụ n’enweghị oge. Mgbe onye nta akụkọ ahụ jụrụ, "I nwere ike iburu ya n'ụlọ?" O kwuru, sị, “Ọ dịghị ihe na-ala azụ. Ebe anyị bụ ndị China, anyị kwesịrị ịga ebe ọ bụla anyị nọ! ”
O dighi oge oyi a na-apughi imeri emeri, ma mmiri opupu agagh adi. Ekwenyere na "ike rụrụ arụ" a nke na-ebu ọbara na anya mmiri nwere ike mechaa chebe mba China na mmeri nje a na ihu igwe nsogbu.
Previous: Oge Ememe Ememe
Ọzọ: Ọrịa na-adịghị obi ọjọọ, ịhụnanya na-ahụ n'anya